सामाजिक खपतका कुरा लिपुलेकदेखि इण्डो प्यासिफिकसम्म – Janasamsad
सामाजिक खपतका कुरा लिपुलेकदेखि इण्डो प्यासिफिकसम्म
बिहिबार, माघ ०२, २०७६ १९४९४८
कुरा २०५०/५५ सालतिरको हो । त्योबेला म सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा थिएँ । म सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्छु । राजनीति पनि त्योसँग सम्बन्धित हुने नै भयो । भन्सार छलेर ल्याएका साधारण मानिसका सामानका पोका पुलिसले समाउने र भन्सार बुझाउने क्रम चलिरहन्थ्यो । हामी राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेतासँग हारगुहार गर्न मानिस आउने नै भए । भन्सार बुझाएको सामान फिर्ता गराउन सकिँदैन भन्ने थाहा नहुने कुरै थिएन । तर, ती साधारण मानिसको काम गरिदिएको भ्रम पार्न मसमेत उनीहरुलाई लिएर धेरै पटक भन्सार प्रमुख, अधिकृत कहाँ गएको छु । हामीले त प्रयास गरेकै हो सकिएन, दिएनन् के गर्नु भनेर सामानवाला मानिसको मन जित्न प्रयास गथ्र्यौैं । तर, यो कामले नतिजा के दिन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्थ्यो । पछि–पछि मलाई यो बेकार लाग्न थालेपछि सत्य कुरा बताई दिन्थेँ तर, मानिस प्रयास नै गरिदिएनन् भनेर दोष दिन्थे ।
निर्वाचनको समयमा त गाउँमा बिजुलीका खम्बा, पानीका पाइप, बाटो खन्ने नाप्ने औजार जस्ता सामान लगेर जनतालाई भ्रममा पारिन्छ । मुहान बिनाका पाइपमा पानी कहिल्यै आउँदैन, तार बिनाको बिजुलीका खम्बाको कुनै प्रयोजन हुँदैन । बजेट नभएको बाटो कहिल्यै बन्दैन तर, पनि यस्ता काम गर्न छाडिएको छैन । त्यसैले होला राजनीति गर्ने मानिस प्रति मतदाताको विश्वास घट्दै गएको ।
माथिका यस्ता प्रसँग साधारण लाग्छन् । तर, यो समाजमा चल्तिको चलन हो । विशेष गरी राजनीतिक मानिसले आपूm जनताको पक्षमा भएको, जनताको काम गरेको, गर्न खोजेको, प्रयास गरेको भनेर देखाउन यस्तो बोल्ने र गर्ने गरिन्छ । आपूmले सत्य कुरा भने पनि अरुले जनतालाई भ्रममा पारेर समर्थन लिन्छन् भन्ने लाग्छ । त्यसैले, भ्रमका लागि भए पनि यस्ता काम कुरा गरिन्छ ।
यस्ता काम कुरा गाउँघरमा मात्रै गरिन्छ भन्ने होइन, राजनीतिको ठूल्ठूला पदमा बसेका मानिसले पनि यस्ता कुरा गर्छन् । जतिठूला नेता र पद त्यति ठूलो प्रभाव हुने नै भयो । कुनै समयमा बन्न लागेको अरुण तेस्रो विद्युत आयोजना यस्तै सामाजिक खपतका लागि पपुलर कुरा गर्ने नेताका कारण धरापमा प¥यो र बनेन । देशले लामोसमय यसको पीडा भोगेको छ ।
अहिले भारतले नेपालको भू–भाग लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागलाई समेटेर आधिकारिक भनिने भ्रमपूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेको बारेमा र अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि)सहयोगको चर्चा शिखरमा छ । यी दुवै विषय अहिले सरकार विरोधीका लागि बिकाउ मसला बनेका छन् । बेच्न कति सक्छन् र त्यसबाट कति फाइदा हुन्छ वा नोक्सान । त्यसको हिसाब समयले देखाउला तर, अहिले सडकमा, सदनमा, पार्टीमा, सत्तापक्ष, विपक्ष सबैका लागि सार्वजनिक खपतका लागि क्रान्तिकारी देखिने मसला बनेको छ ।
संयोग के मिलेको छ भने नेपाली कम्युनिष्टहरुले सदाबहार विरोधको केन्द्रमा राखेका भारत र अमेरिका यहाँ जोडिएका छन् । भारतले नेपाली भूमि मिचेर सेनाको क्याम्प राख्यो, नक्कली महाकाली नदी बनाउने र भ्रम छर्ने काम ग¥यो । यो काम भारतले झण्डै ७० वर्ष पहिलेदेखि गर्दै आएको हो । यो बीचमा धेरै सरकार बने, फेरिए । व्यवस्था फेरियो । समस्या बल्झिँदै गयो । अहिले भारतले अर्को थप कदम चाल्यो । यसको चौतर्फि विरोध भयो । सरकारले औपचारिक विरोध ग¥यो । यो मामलामा विपक्षीलगायत देशमा भएका सबै राजनीतिक शक्तिको एक मत छ । सरकारका लागि यो एकता बल हो । यो समस्याको समाधानको पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ । यसमा समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो सरकारले गर्ने हो । कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नु सबैको हितमा छ । कुटनीतिक पहलका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । त्यसले समय लिन्छ । तर, सरकारले केही गरेन, खोई वार्ता गरेको, किन सेना नपाठाएको, किन भारतीय सेना नहटाएको, सरकार असक्षम भयो, भारतको अगाडि झुक्यो, सरकारको राष्ट्रवाद धनुष्टङ्कार मोडमा मोदीको अगाडि नुहिन पुग्यो आदि जस्ता कुरा गरेर सार्वजनिक खपतका कुरा गरेर एकछिनका लागि जनतालाई भ्रममा पार्न सकिएला तर, यसखालको काम कुराले कुनै नतिजा दिँदैन । बरु उल्टो परिणाम निकाल्न सहयोग गर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहमति दिएर भारतले नक्सा निकालेकोसम्म भन्न भ्याए । पछि यो कुराको विरोध उनकै पार्टीमा चर्कोरुपमा भएपछि चुप भए ।
अर्को अमेरिकी सहयोग एमसिसिको प्रक्रिया विश्वभरमा सञ्चालनमा छ । ५० वटा देशमा ४७ वटा सहयोगका कार्यक्रम चलेका छन् । यो सहयोग अमेरिकाले कम विकसित देशलाई दिने ठूलो अनुदान सहयोग हो । सन् २००२ देखि यो कार्यक्रम शुरु भएको इतिहास छ । यो सहयोगका केही शर्तहरु छन् । जस्तै–यो सहयोग सम्बन्धित देशका जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने पूर्वाधार र विकास निर्माणका आयोजनामा खर्च गरिनुपर्छ । आयोजना शुरु भएको पाँच वर्षभित्रमा पूरा हुनुपर्छ । यी बाहेक यस्तो सहयोग ती देशमा मात्रै हुन्छ, जुन देशले आफ्ना जनताका लागि स्वास्थ्य, शिक्षामा राम्ररी लगानी गरेको होस्, काम गरेको होस्, विधिको शासन होस्, खुला आर्थिक क्रियाकलापको स्वतन्त्रता होस् आदि । यी महत्वपूर्ण शर्त पूरा गरेको देशमा स–साना आयोजनाका लागि होइन ठूला–ठूला आयोजना सम्बन्धित देश आपैmँले छानेर यस्तो सहयोग माग गर्न सक्छन् । नेपाललाई दिने भनिएको ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा दाताले आपूmले लगानी गरेको पैसाले त्यो देशमा काम हुन्छ कि हुँदैन, लगानी भएको आयोजना सम्पन्न भएर कार्यान्वयन हुँदा त्यो देशका जनताले फाइदा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर सोच्नु, सोध्नु कसरी बेठीक हुन्छ र ?
दाताको पहिलो चासो नेपालले यस्ता ठूला आयोजना ५ वर्षभित्रमा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चासो राखेको छ । मेलम्चिको पानी २२ वर्ष भयो, काठमाडौंमा आएको छैन । एउटा साधारण २ वर्षमा सकिने पुल बन्न एक दशक लाग्छ । राजनीतिक दाउपेच, अदालत, कानुन आदिका कारण ठूला आयोजना शुरुनै हुन नसकेको, शुरु भएका आयोजना पनि अदालती प्रक्रिया र कानुनी झन्झटका कारण उल्झनमा परेका उदाहरण कति हो कति छन् । त्यसैले, आयोजना शुरु भएपछि फेरी अदालतको चक्कर काट्नु नपरोस् भनेर कानुनी हिसाबले बलियो बनाउन यसलाई दाताले संसदले पास गरोस् भन्ने आशय गरेको देखिन्छ । यसो भयो भने अदालती प्रक्रिया र कानुनी झन्झटका कारण आयोजना लम्बिने र समयमा पूरा नहुने जोखिम कम हुन्छ । यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । यति ठूलो सहयोगको कार्यक्रममा सरकारले चिन्ने तर, संसद्ले नचिन्ने किन हुनुपर्छ ? कुनै बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई र सहकारीले आफ्नै सदस्यलाई व्याजमा ऋण दिँदा समेत ऋण लिनेले यो पैसाको सदुपयोग गर्छ कि गर्दैन, गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्छ भने कुनै दाताले दिएको अनुदान सहयोग सदुपयोग हुने आधार खोज्दा सायद बेठीक हुँदैन ।
यो सहयोग लिँदा दाताले भारतको सहमति चाहेको छ भन्ने कुराको आधार खोज्नु पर्छ । यो सहयोगको पैसाले हामीले ४०० केबिएको विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने भनेका छौं । यो प्रसारण लाइनबाट नेपाललाई बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने भनेका छौं । हामीले भारतमा गएर प्रसारण लाइन बनाउने होइन । भारतको सीमासम्म बनाउने हो । त्यहाँदेखि उताको भूमिमा भारतले बनाउने हो । भारतले यस्तो प्रसारण लाइन बनाउने र बिजुली किन्ने कुराको सहमति जनाएमा मात्रै यो आयोजनाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ । त्यसैले, यो कुरामा भारतलाई पनि सहमति गराउ भन्नु कुनै हस्तक्षेप बुझ्ने हो र ?
जहाँसम्म इण्डो प्यासिफिक सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग हो भन्ने भनाई छ । नेपालले प्राप्त गर्ने यो सहयोगका लागि हुने सम्झौता पत्रमा यस बारेमा कतै उल्लेख नभएको भन्ने जानिफकारहरु बताउने गर्छन् । त्यसो हो भने किन आपत्ति हुनुपर्ने ?
नेपालको गरीबि निवारणमा सहयोग गर्ने मुलुकमा अमेरिका अग्रस्थानमा नै छ । नेपालमा भित्रिने पर्यटकमा भारत, चीन र बेलायत पछि अमेरिकीको संख्या धेरै छ । नेपाल बाहिर भारत, भुटान र बर्मापछि सबैभन्दा धेरै नेपाली भाषि अमेरिकामा छन् । अमेरिकामा बस्ने गरी जान चाहने र डिभि भर्ने नेपालीको संख्या ठूलै छ ।
अहिले सत्तामा नेकपाको सरकार छ । केपी शर्मा ओली देशका प्रधानमन्त्री छन् । नेकपामा दुईजना अध्यक्ष छन् । अहिले मन्त्री भएका, पहिले मन्त्री भएका तर, अहिले हुन नपाएका, मन्त्री हुन वर्षौंदेखि पर्खेर बसेका, पार्टीभित्र भाग पाएर पनि मन्त्री नपाएका, केपी ओलीका सधैं स्थायी रुपमा पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी भएका, केपी ओलीले सुशासन कायम गर्न खोज्दा अलि–अलि अप्ठ्यारोमा परेका थुप्रै नेता पार्टीमा सक्रिय छन् । तीमध्ये केहीलाई बोलेर काम देखाउनु परेको छ । गरेर हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ । तर, सामाजिक खपतका लागि फलानो नेताले यो बोल्यो भन्ने पार्नु छ । विस्तारवादी भारतले सीमा मिचेर सेना राखेको छ । खोई सरकार के हेरेर बसेको छ भनेर मज्जाले कराउन सकिन्छ । साम्राज्यवादी अमेरिकाले दिएको अनुदान सहयोग किन लिने ? के स्वार्थले दिएको हो ? कम्युनिष्ट सरकारले किन लिने ? भन्न सकिन्छ । हुन त अहिले नेताहरु विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शब्दहरु कार्यकर्ताको भेलामा मात्रै प्रयोग गर्छन् । आमरुपमा भन्दैनन् । किनकी तिनको सहयोग र असल सम्बन्ध अपरिहार्य छ भन्ने राम्ररी थाहा छ । अमेरिकाको विरोध गर्दै निर्माण गरिएको कम्युनिष्ट पार्टी र भारतको विरोध गरेर निर्माण भएको नेपाली राष्ट्रवादीका लागि यी विषय उपयुक्त नै हुन् । तर, यो विषयको केस्रा केलाएर के ठीक के बेठीक भन्ने र जाँच्ने न कसैलाई फुर्सद छ, नत आवश्यकता नै । नेपाली राजनीतिको रोग नै हो फेददेखि टुप्पासम्मका धेरै नेताले सामाजिक खपतका लागि चर्का कुरा गर्ने तर, नतिजामुखी काम नगर्ने । त्यसको शिकार नेताको साइज र प्रभावको आकारका आधारमा देशले भोगिरहनु परेको छ ।